जनवरी 29, 2019 जनवरी 29, 2019 साइन्स इन्फोटेक	4 Comments जडिबुटी, डा. राम बहादुर बोहरा
जडिबुटी कुन समय र आयु्मा निकाल्दा बढी उपयोगी हुनसक्छ भन्ने जानकारी विना निकालेको जडिबुटीबाट बनेको औषधि त्यति राम्रो हुदैन । प्रकृतिको भिन्दै नियमहरू छन् । आजको लेखमा मैले जडिबुटी उखाल्ने समयको बारेमा प्रकाश पार्दैछु ।
जडिबुटीलाई हामीले ३ कालमा विभाजन गरेका छौं । बाल्यकाल, युवा अवस्था र बृद्ध अवस्था गरी ३ भागमा बाडेका छौं । बाल्यकालमा र बृद्धा अवस्थामा निकालेको जडिबुटी त्यति राम्रो मानिदैन भने युवा अवस्थामा निकालेको जडिबुटी सवैभन्दा राम्रो मानिन्छ । जडिबुटी फूल्नुपुर्व बाल्यकाल, फूल्न थालेपछि युवा अवस्था र फूलेर झर्ने बेलालाई बृद्ध अवस्था भनेको छ ।
जडिबुटी उखाल्ने समय भनेको युवा अवस्थालाई सवैभन्दा उपयुक्त समय तोकेको छ । जडिबुटी युवाकालको ठिक मानेको छ । जडिबुटी उखाल्ने समएलाई पनि ३ भागमा लिएका छौं । विहान, दिउसो र सांझ यी ३ कालमध्ये विहान सवै भन्दा उपयुक्त समय तोकिएको छ । दिउसो घामको ज्वति ज्यादा हुने हुनाले त्यति बेला रस कम हुने र रस सुक्ने हुनाले राम्रो मानिदैन ।
जडिबुटी फल्ने बेलामा पातमा प्रयाप्त रस भरिएको हुन्छ त्यो बेलामा पात निकालेर राखेमा राम्रो फाइदा गर्दछ ।
फूल राम्रो संग फूलेको बेलामा तोडेर राख्नु उपयुक्त हुन्छ सुकेपछी रस पनि सुकेको हुन्छ यस्मा औषधिको गुणस्तर घड्दछ ।
जडिबुटी जब परिपक्व भएपछि फल्छ र फलेर राम्रो संग पाकेपछी मात्र तोड्नुपर्दछ ।
औषधिको लागि सवै भन्दा उपयुक्त काल शीतकाल भन्दा ग्रीष्मकाल उपयुक्त मानेको छ । यो समयमा रस तल गएको हुन्छ ।
आजकल आधुनिक युगमा जडिबुटी कुट्ने पिस्ने काम फलाममा गरिएको हुन्छ । जडिबुटीको रस निकाल्दा काठको मुसली ले कुटेर मलमलको कपडाले छानेर प्रयोग गर्ने भनेको छ । झोल राख्दा हमेसा सिसाको भाडामा राख्नुपर्दछ ।
मृगौलाको पथरी हुँदा खान नहुने खानेकुराहरू →
4 thoughts on “जडिबुटी उखाल्ने समय”
Pingback:समय र यसको महत्व
Pingback:मार्सी चामल भनेको के हो ?
Pingback:जडिबुटी र नेपालको अवस्था